दाँतमा प्वाल परेको छ ? घरेलु विधिबाट यसरी पुर्नुहोस् प्वाल परेको दाँत – Sidha Kura
बाढीले जलमग्न भएपछि खड्कुलामा बसेर जन्ती गए बेहुली ल्याए
कसरी बिताउँछन् आर्यनले दिन रात? शाहरुख खानले पठाएको ४५ सय यसरी खर्च गरे
गुडिरहेको जीप अचानक आएको भेलले बगाएर बेपत्ता
नेपालमै पहिलो पटक यस्ता व्यक्ति को निधन जसले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ
महाकालीले भत्कायो कञ्चनपुरको चर्चित ‘भाइरल रोड’
घर भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु, घाइते ६ जनाको कस्तो छ अवस्था ?
सामान किन्ने भिड जम्मा भएको पसलमा जमिन भासियो, एक दर्जन मानिस दलदलमा परे (भिडियो हेर्नुस्)
मुख्य पृष्ठ /Tips/दाँतमा प्वाल परेको छ ? घरेलु विधिबाट यसरी पुर्नुहोस् प्वाल परेको दाँत
दाँतमा प्वाल परेको छ ? घरेलु विधिबाट यसरी पुर्नुहोस् प्वाल परेको दाँत
9,360 1 minute read
कसरी प्वाल पर्छ ? दाँत दुरुस्त भयो भने त्यसले सुस्वास्थ्यको संकेत गर्छ । दाँतको राम्रो ध्यान दिइएन भने ती कुहिन थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा मुखमा अड्केका खानेकुराहरू मुखका ब्याक्टेरियाको सहायतामा एसिडमा परिणत हुन्छन्। यसले दाँतमा प्वाल बनाउँछ। यही प्वाललाई अंग्रेजीमा क्याभिटी भनिन्छ ।
क्याभिटी बन्ने र त्यसलाई उपचार गर्ने साँचो हाम्रै हातमा छ । हामीले अस्वस्थ खाना पूरै छोडेमा मात्र दाँतमा प्वाल बन्न पाउँदैन । खाना खाएपछि ब्रश गर्ने, कुल्ला गर्ने गरिरहनुपर्छ । अनि लगातार दाँत दुख्यो वा झमझम भयो भने तत्कालै दन्तचिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
तर यहाँ केही घरेलु उपाय पनि सुझाइएको छ जसले क्याभिटीबाट मुक्ति दिन्छ । हुन त दाँतका जटिल समस्याका लागि दन्तचिकित्सककहाँ नै पुग्नुपर्छ तर यहाँ बताइएका केही उपाय अपनाउँदा दाँतमा प्वाल बन्न पाउँदैन ।
चिनीको मात्रा घटाउनुस् । चिनीमा धेरै एसिड हुन्छ र यसले प्लाक बनाउँछ जसका कारण दाँतमा प्वाल पर्छ ।
नरिवलको तेलले दाँत कुल्ला गर्दा पनि धेरैथरी समस्या समाधान हुन्छन् । प्वाल पनि यही कुल्लाले ठीक गर्छ । दिनको कम्तीमा पाँच मिनेट कुल्ला गर्नुस् । अझ, खाली पेटमा कुल्ला गर्नुभयो भने झन् प्रभावकारी हुन्छ ।
तातोपानीमा नून हालेर कुल्ला गर्दा पनि प्वाल टालिन्छ । प्रत्येक रात कुल्ला गर्नुभयो भने थप राम्रो परिणाम आउँछ ।
भ्यानिला इसेन्समा थोरै मात्रामा अल्कोहल हुन्छ जसले प्राकृतिक रूपमा पीडा शमन गर्छ । प्वाल परेको ठाउँमा यसले दाँत लट्ठ पारिदिन्छ । एउटा कपासको डल्लोमा अलिकति भ्यानिला इसेन्स चोपेर प्रभावित क्षेत्रमा लगाउनुभयो भने पीडा हराउँछ ।
ल्वाङको तेल दाँतको समस्या समाधान गर्ने सबभन्दा पुरानो औषधि हो । यसमा भएको औषधीय गुणका कारण प्वालले गर्ने झमझमलाई घटाउँछ । कपासमा तेल हालेर प्वाल बनेको ठाउँमा हाल्नुस् । तेल ननिल्नुहोला । यसो गर्दा पनि पीडा र झमझमबाट मुक्ति पाइन्छ ।
हृदयघात हुनु अगावै शरीरले दिन्छ यी ८ संकेत, भूलेर पनि नगर्नुहोस् वेवास्ता
७ दिनमै कालो अनुहार गोरो बनाउनुस, निकै सरल यी १० घरेलु उपायले !
दाँतमा पनि हुन्छ पत्थरी, कसरी हटाउने ? जान्नुहोस्
मोटोपन घटाउन यी गल्ती त गर्नुभएको छैन ? कपालको होला नास